ဘာကြောင့် အဲရစ်ဆင်က အသင်းကြီးတွေရဲ့ ပေါချောင်ကောင်းပစ်မှတ်ဖြစ်လာနိုင်တာလဲ ?
July 19, 2019 Htin Kyaw Lwin News, Premier League 0
လက်ရှိနွေရာသီဈေးကွက်အတွင်း စပါးအသင်းကွင်းလယ်လူအဲရစ်ဆင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့သတင်းတွေက တော်တော်လေးကိုလှုပ်ခတ်နေတာပါ။ ထိပ်တန်းအဆင့်ကွင်းလယ်ဖန်တီးရှင် ဖြစ်တဲ့ အဲရစ်ဆင်လိုလူမျိုးကို လက်ရှိဈေးကွက်ပေါက်ဈေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် ပေါင်သန်း 150 လောက်အထိ သတ်မှတ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စပါးအသင်းဘက်ကလည်း အဲဒီလောက်အထိအလိုရှိနေပေမယ့် စစ်တမ်းတစ်ရပ်အရတော့ အဲရစ်ဆင်ဟာ ထိပ်တန်းကလပ်တွေအတွက် ပေါချောင်ကောင်းဈေးနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ သုံးသပ်ထားပါတယ်။
ဒါဟာ စပါးအသင်းနဲ့ စာချုပ်သက်တမ်းနောက်ဆုံး 12 လထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့ အဲရစ်ဆင်ရဲ့အခြေအနေကြောင့်ပါပဲ။ အသက် 27 နှစ်အရွယ် အဲရစ်ဆင်ဟာ စပါးနဲ့ 2020 ခုနှစ်အထိသာ စာချုပ်သက်တမ်းရှိထားတာဖြစ်ပြီး စာချုပ်သစ်ဆွေးနွေးမှုကလည်း လုံးဝအဆင်ပြေခြင်းမရှိပါဘူး။ ချဲလ်ဆီးဟာ အဲရစ်ဆင်လိုပဲဖြစ်နေတဲ့ ဟာဇက်ကို ရီးရဲလ်ထံ ပေါင်သန်း 150 နဲ့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒါဟာ ဈေးကွက်သဘောတရားအရ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ အခြေအနေမျိုးသာဖြစ်ပြီး အဲရစ်ဆင်ကို အလားတူရောင်းချနိုင်ဖို့ကတော့ ဖြစ်နိုင်ခြေလုံးဝမရှိသလောက်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ အဲရစ်ဆင်ကိုယ်တိုင်က စပါးကနေထွက်ခွာဖို့ဆန္ဒရှိနေတာကြောင့် စပါးနည်းပြပိုချက်တီနိုကလည်း ကစားသမားကိုဆုံးရှုံးရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ၀န်ခံထားပါတယ်။ စပါးနဲ့စာချုပ်သစ်ကိုသာ ကစားသမားဘက်က ယတိပြတ်ငြင်းပယ်ပြီး ထွက်ခွာဖို့ဖိအားပေးမယ်ဆိုရင် ဒီနွေရာသီအတွင်းမှာပဲ တန်ကြေးတစ်ရပ်နဲ့ မဖြစ်မနေရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စပါးအနေနဲ့ အဲရစ်ဆင်အတွက် ပေါင်သန်း 150 ရဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သုံးသပ်ထားတာပါ။ သတင်းတွေအရတော့ အက်သလက်တီကိုဟာ အဲရစ်ဆင်ကို ပေါင်သန်း 120 နဲ့ခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုကြပေမယ့် သူ့ရဲ့တန်ကြေးဟာ အဲဒီထက်များစွာပိုနိမ့်ပြီး ပေါင်သန်း 60 လောက်အထိလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ အဆိုပါစစ်တမ်းက ဆိုပါတယ်။
အဲရစ်ဆင်ဟာ စပါးအသင်းမှာ တစ်ပတ်လစာ ပေါင် 75,000 သာရရှိနေတာဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ဆိုလျှင် ပေါင်4သန်းသာရှိနေတာပါ။ စာချုပ်သစ်အတွက် စပါးဘက်က ပေါင် 160,000 နဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာကို ကစားသမားရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကငြင်းပယ်ထားပြီး ပေါင် 200,000 နဲ့ထပ်မံကမ်းလှမ်းဖို့ စပါးက ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲရစ်ဆင်ကို စပါးမှာဆက်နေအောင် ငွေကြေးတစ်ခုတည်းနဲ့ ဆွဲဆောင်လို့မရနိုင်ဘူးလို့လည်း သူ့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကကြေညာထားတာပါ။ သူဟာ 2013 ခုနှစ်က အေဂျက်ဇ်ကနေ စပါးကို ပေါင် 11 သန်းနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့သူဖြစ်ပြီ6းရာသီအတွင်း ပြိုင်ပွဲအရပ်ရပ် 277 ပွဲကစားကာ 66 ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာကွောငျ့ အဲရဈဆငျက အသငျးကွီးတှရေဲ့ ပေါခြောငျကောငျးပဈမှတျဖွဈလာနိုငျတာလဲ ?
လကျရှိနှရောသီဈေးကှကျအတှငျး စပါးအသငျးကှငျးလယျလူအဲရဈဆငျနဲ့ပတျသကျတဲ့ အပွောငျးအရှသေ့တငျးတှကေ တျောတျောလေးကိုလှုပျခတျနတောပါ။ ထိပျတနျးအဆငျ့ကှငျးလယျဖနျတီးရှငျ ဖွဈတဲ့ အဲရဈဆငျလိုလူမြိုးကို လကျရှိဈေးကှကျပေါကျဈေးနဲ့နှိုငျးယှဉျရငျ ပေါငျသနျး 150 လောကျအထိ သတျမှတျထားရမှာဖွဈပါတယျ။ စပါးအသငျးဘကျကလညျး အဲဒီလောကျအထိအလိုရှိနပေမေယျ့ စဈတမျးတဈရပျအရတော့ အဲရဈဆငျဟာ ထိပျတနျးကလပျတှအေတှကျ ပေါခြောငျကောငျးဈေးနဲ့ချေါယူနိုငျတဲ့သူမြိုးဖွဈလာနိုငျခွရှေိတယျလို့ သုံးသပျထားပါတယျ။
ဒါဟာ စပါးအသငျးနဲ့ စာခြုပျသကျတမျးနောကျဆုံး 12 လထဲကိုရောကျရှိလာတဲ့ အဲရဈဆငျရဲ့အခွအေနကွေောငျ့ပါပဲ။ အသကျ 27 နှဈအရှယျ အဲရဈဆငျဟာ စပါးနဲ့ 2020 ခုနှဈအထိသာ စာခြုပျသကျတမျးရှိထားတာဖွဈပွီး စာခြုပျသဈဆှေးနှေးမှုကလညျး လုံးဝအဆငျပွခွေငျးမရှိပါဘူး။ ခြဲလျဆီးဟာ အဲရဈဆငျလိုပဲဖွဈနတေဲ့ ဟာဇကျကို ရီးရဲလျထံ ပေါငျသနျး 150 နဲ့ရောငျးခနြိုငျခဲ့ပမေယျ့ ဒါဟာ ဈေးကှကျသဘောတရားအရ ဖွဈတောငျ့ဖွဈခဲ အခွအေနမြေိုးသာဖွဈပွီး အဲရဈဆငျကို အလားတူရောငျးခနြိုငျဖို့ကတော့ ဖွဈနိုငျခွလေုံးဝမရှိသလောကျပဲလို့ဆိုပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ အဲရဈဆငျကိုယျတိုငျက စပါးကနထှေကျခှာဖို့ဆန်ဒရှိနတောကွောငျ့ စပါးနညျးပွပိုခကျြတီနိုကလညျး ကစားသမားကိုဆုံးရှုံးရနိုငျခွရှေိတယျလို့ ဝနျခံထားပါတယျ။ စပါးနဲ့စာခြုပျသဈကိုသာ ကစားသမားဘကျက ယတိပွတျငွငျးပယျပွီး ထှကျခှာဖို့ဖိအားပေးမယျဆိုရငျ ဒီနှရောသီအတှငျးမှာပဲ တနျကွေးတဈရပျနဲ့ မဖွဈမနရေောငျးခဖြို့ပွငျဆငျရနိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စပါးအနနေဲ့ အဲရဈဆငျအတှကျ ပေါငျသနျး 150 ရဖို့ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ သုံးသပျထားတာပါ။ သတငျးတှအေရတော့ အကျသလကျတီကိုဟာ အဲရဈဆငျကို ပေါငျသနျး 120 နဲ့ချေါယူဖို့ပွငျဆငျနတေယျလို့ဆိုကွပမေယျ့ သူ့ရဲ့တနျကွေးဟာ အဲဒီထကျမြားစှာပိုနိမျ့ပွီး ပေါငျသနျး 60 လောကျအထိလညျးဖွဈသှားနိုငျတယျလို့ အဆိုပါစဈတမျးက ဆိုပါတယျ။
အဲရဈဆငျဟာ စပါးအသငျးမှာ တဈပတျလစာ ပေါငျ 75,000 သာရရှိနတောဖွဈပွီး တဈနှဈဆိုလြှငျ ပေါငျ4သနျးသာရှိနတောပါ။ စာခြုပျသဈအတှကျ စပါးဘကျက ပေါငျ 160,000 နဲ့နောကျဆုံးအကွိမျကမျးလှမျးခဲ့တာကို ကစားသမားရဲ့ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ကငွငျးပယျထားပွီး ပေါငျ 200,000 နဲ့ထပျမံကမျးလှမျးဖို့ စပါးက ပွငျဆငျနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အဲရဈဆငျကို စပါးမှာဆကျနအေောငျ ငှကွေေးတဈခုတညျးနဲ့ ဆှဲဆောငျလို့မရနိုငျဘူးလို့လညျး သူ့ရဲ့ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ကကွညောထားတာပါ။ သူဟာ 2013 ခုနှဈက အဂေကျြဇျကနေ စပါးကို ပေါငျ 11 သနျးနဲ့ရောကျရှိလာခဲ့သူဖွဈပွီ6းရာသီအတှငျး ပွိုငျပှဲအရပျရပျ 277 ပှဲကစားကာ 66 ဂိုးသှငျးယူထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
၂၉နှစ်ကြာ ဖလားလက်မဲ့ဖြစ်နေမှုကို အဆုံးသတ်လိုက်တဲ့ အယ်လ်ဂျီးရီးယား
နေမာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရီးရဲလ်အသင်းဖော်သစ်ဟာဇတ်ကို စိတ်ပျက်စေမယ့်စကားမျိုးပြောလိုက်တဲ့ မာဆယ်လို